Linux 5.3: nyowani vhezheni yekernel yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds yazivisa zvekare vhezheni yekupedzisira yeLinux kernel muLKML. Ino nguva iri pamusoro Linux vhezheni 5.3 izvo zvinounza dzimwe dzenhau idzo tanga tichiona mukuburitswa kwevakamboburitswa Vanodaidzwa. Unotoziva kuti kwave kuine imwe RC, vasvika rc8, sezvo Linux yakaona zvichidikanwa. Chimwe chezvikonzero zveiyo yekuwedzera vhiki rekusimudzira raive rwendo rwandakanga ndaronga.
Izvo zvakasiya zvimwe zvinhu zvakamirira uye ini ndaisada kuregeredza izvo. Uye zvakare, ivo vakave nematambudziko akakura, senge chokwadi FS btrfs maitiro ehunhu. Asi ivo vakwanisa kukurira izvo uye vachienderera mberi nekusimudzira, kunyange Linux 5.3 inosvika zvishoma kunonoka ichienzaniswa neyaive yakatanga kurongwa. Saka ikozvino unogona dhawunirodha mhedzisiro kuimisa, kuisanganisa uye kuiisa pane yako distro kuyedza izvo zvitsva ...
Nezve shanduko, kunze kwe gadzirisa matambudziko ese akadaro izvo zvandakambotaura kubva ku rc8 uye zvakakonzera kukanganisa, pane zvimwe zvinhu zvakakwenenzverwa, senge kuvandudzwa kweiyo I / O system, shanduko nenhau maererano nevatyairi, ehe saizvozvo eaya emambure, zvigadziriso zvezvivakwa zve processor ( s390, RISC-V, x86, ARM,…), IPC kugadzirisa, FS kugadzirisa (senge btrfs), KVM uye VirtIO shanduko, nezvimwe.
Zvino kusvika shandira iyo yekutanga rc yeLinux vhezheni 5.4. Vagadziri vachatanga kutarisa kumberi, seLinus Torvalds hwindo rekuwedzera maficha kune ramangwana Linux 5.4. Kunyangwe, pamwe haisiyo yekupedzisira nhau nezve iyo Linux 5.3 bazi ratinahwo, nekuti vamwe vanochengeta vanozochengeta kuramba vachiripaka kana matambudziko akamuka, saka tichaona Linux 5.3.x shanduro munguva pfupi. Unenge watoziva kare, kuti iyo nhamba dzeshanduro dzinotanga nenhamba yepamusoro (5), ichiteverwa neiyo diki nhamba (3) uyezve nhamba dzekudzokorora kweshanduko diki (zvigamba zvembugs nekushomeka).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.3: nyowani kernel vhezheni yava kuwanikwa